Home Heerarka CLASSIC Jose Antonio Reyes Sidee sheeko xambaarsan sheekooyinka sawir la'aanta
Jose Antonio Reyes Sidee sheeko xambaarsan sheekooyinka sawir la'aanta. Amaahda Arseblog
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full Story ee Legend Football Legend kaas oo si fiican loo yaqaan naaneyska "La Perla". Our Jose Antonio Reyes Our Story Story iyo Qaabilida Biinta Warqaduhu waxay kuu keenaan xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la arki karo markii uu carruurnimada ilaa taariikhda.
Falanqayntu waxay ku lug leedahay noloshiisa hore, asalka qoyskeeda, waxbarashadiisa / xirfad shaqo, shaqabixinta, sababta geeridiisa, nolosha xiriirka, nolosha shakhsiga, nolosha qoyska, iyo xaqiiqooyinka hab nololeedka iwm.
Haa, qof walba wuu ogyahay isaga oo aan aheyn Arsenal iyo Sevilla Legend, laakiin ciyaaryahankan PlayStation leh Electric Pace.
Xusuusashada Jose Antonio Reyes. Ku darso Cyprus Mail iyo EBay
Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal kubada cagta ah oo kaliya ayaa tixgelinaya Jose Antonio Reyes Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilowno.
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' Hore iyo Taariikhda Qoyska
Jose Antonio Reyes wuxuu ku dhashay maalinta 1st ee September 1983 hooyadiis, Mari Calderon iyo aabe, Francisco Reyes ee Utrera, Spain. Hoos waxaa ka mid ah sawirka Antonio Reyes waalidiinta kuwaas oo laga yaabo in ay joogaan 60 xilli dambe ee qoraal ahaan.
Jose Antonio Reyes Waalidiinta - Mari iyo Francisco
Reyes wuxuu ku koray Utrera, Gobolka Seville oo u dhashay waalidiinta Romani. Qaadashada ereyga "Romani" ee su'aasha ah, Reyes wuxuu leeyahay asalkiisa qoyskiisa waqooyiga Hindiya kaas oo ku yaal gobollada Punjab ee Hindida casriga ah. Isagu keligiis uguma korin waalidkiis. Reyes wuxuu lahaa walaalo magaciisu ku qoran yahay Jesús Reyes.
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' Xirfadda Soo-koobista
Xaqiiqda Reyes ee kubada cagta ayaa ku soo bandhigay inuu ku biiray kooxda da 'yarta ee Sevilla FC da'da 10. Reyes oo farxad leh ayaa udub dhexaad u ah kooxda oo dhan heerarka dhalinyarada.
Jose Antonio Reyes Hore Life. Ku darso CaT
Reyes ayaa ku soo baxay si uu u dhiso sumcaddiisa sida qeybta weerarka ee Sevilla. Reyes ayaa ugu dambeyntii saxiixay qandaraas buuxa oo ku saabsan 1999, isagoo ka dhigaya ciyaartoydiisa ugu muhimsan xilliga qandaraaska ee 16.
Xilligii ugu fiicnaa ee xirfadiisa ciyaareed waxa uu ahaa markii uu ka mid noqday ciyaartoydii Arsenal ee 'Invincibles' oo ku guuleystay horyaalka 2004 Premier League iyadoo aan la garaacin.
Xilliga ugu wanaagsan ee Jose Antonio Reyes Life
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' Dhimashada
Nasiib daro ka dib dhimashadii murugada ee Emiliano Sala, FOOTBALL waxay aragtay murugo luminta xiddig kale sida la xaqiijiyay in Jose Antonio Reyes dhintay.
Reyes wuxuu ku geeriyooday da'da 35 ee 1st ee June 2019 ka dib shil baabuur oo loo yaqaan 'Shilalka Gaadiidka". Dhacdadan murugada leh ayaa ka dhacday wadada waddanka A-376, waddo isku xirta Utrera oo leh Sevilla, Spain.
Jose Antonio Reyes Shil Deeqo si ay uugu soo noqoto
Sida laga soo xigtay TheSun, Reyes ayaa lagu dilay baabuurkiisa oo ay la socdaan ina-adeerkiis Jonathan Reyes ka dib markii gaarigiisa uu shilku dhacay, ka dibna wuxuu qabsaday olol. Sida laga soo xigtey ilo dhow, Reyes wuxuu ku dhintay baabuurka.
Xaqiiqda dhabta ah ee Shilalka:
Sida laga soo xigtay saraakiisha booliska Spain, Jose Antonio Reyes wuxuu ku socday wadada xNUMXmph (135kmph). Tani waxay dhaaftay xadka xawaaraha Spain ee 220mph / 75kmph. Awood darro in laga baxsado boodh uu sababay shilka iyo dhimashadiisa.
Dhanka kale, dhimashadiisa waxa ay ka dhacday maalintii 2018 / 2019 UEFA Champions League ee u dhaxeysay Tottenham iyo Liverpool. Xaqiiqdii, maalin farxad leh taageerayaasha kubadda cagta ayaa si lama filaan ah u noqday mid murugo leh ka dib geeridiisa. Halyeeygii hore ee Arsenal ayaa ahaa 35 sano jir ah markii uu geeriyooday. Reyes, naftaada naftaada nasasho!
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' Nolosha Xiriirka
Kadib dabeecada dambe ee Arsenal, waxaa jiray xaas nasiib leh oo ku nool qofkii quruxda badnaa ee Noelia Reyes kuwaas oo wax yar la yaqaan.
Jose Antonio Reyes iyo xaaskiisa - Noelia. Lacagta IG
TheSun waxa uu soo ururiyay in labada shimbir ee jacaylku ay xirxireen joornaalka June 2017 xaflad ka dhacday kaniisada Virgen de la Consolacion ee magaalada uu ku dhashay ee Utrera.
Jose Antonio Reyes iyo xaaskiisa Noelia. Ku darso TheSun.
Ka hor inta uusan Antonio Reyes dhiman, labadiisii ​​iyo xaaskiisu waxay u dabaaldageen siddeed sanno oo wada jir ah, iyadoo Noelia ay ku soo daabacday Instagram sawirkeedii ay sheegtay;
"Marka aanad wax weydiisan waxna way ku siinayaan wax walba. Waan fahmay in qof walba uu yahay meesha ay doonayaan inay noqdaan iyo cidda ay doonayaan inay la joogaan. Jacaylka 8 sanado badan ayaan jeclahay. "
Xoogaa yaraa ayay ku liitay, dhamaan reer Reyes iyo taageerayaasha kubada cagta ayaa ogaa inuu noqon lahaa labo sano ka dib guurka. Reyes ayaa geeriyooday isagoo ka tagay xaaskiisa iyo gabadh qurux badan sawirka hoose.
Jose Antonio Reye Dumarka iyo Gabadha. Lacagta IG
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' LifeStyle ka hor dhimashada
Intii uu geeriyooday, Jose Antonio Reyes wuxuu ahaa mid jecel baabuurta. Jacaylkiisa wuxuu ahaa BMW Series. Jacaylka uu u qabo baabuurta qunyar-socodka ah wuxuu kicinayaa su'aalo ku saabsan duruufaha ku hareeraysan dhimashadiisa
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' Nolosha Qoyska
Intii uu geeriyooday, Reyes ayaa loo tixgeliyey "Nin weyn oo qoyska ah"Oo sharraxay waalidkiis iyo sidoo kale jimicsiga Isbaanishka ee Utrera oo labadaba dhalashadiisa iyo geeri labadaba.
Mari iyo Francisco labaduba waxay ku darsadeen faa'iidada ay u leeyihiin in ay maskaxdoodu noqoto wiilkooda. Xaasidnimo, June 1st 2019 xaqiiqdii waxay ahayd maalin murugo leh waalidiinta Reyes markii ay isaga lumiyeen gacantii qabow ee dhimashada dabka.
Intii uu geeriyooday, Jose Antonio Reyes ayaa u muuqday mid u dhow inuu hooyadiis ka badan yahay aabihiis sida korka sawiradooda laga arkay warbaahinta bulshada.
Jose Antonio Reyes iyo hooyadiis-Mari Calderon
Reyes magaca dambe "Calderon"Wuxuu asalkiisu ka soo jeedaa hooyadiis oo magaceeda ku dhalatay ka hor intaysan guursan ninkeeda Francisco.
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography' Xaqiiqooyin Kale
Ma ogeyd?… Isagoo dib ugu laabtay kooxdiisii ​​Sevilla ee 2012 wuxuu ku faraxsanaa Jose Antonio Reyes iyo qoyskiisa iyagoo arkayay inuu ku soo laabtay gurigiisii. Halka kooxda, Reyes ayaa ku qaaday seddex horyaal oo Europa League ah oo u dhaxeeyay 2014 iyo 2016.
Sidoo kale markii uu amaah ku joogay Real Madrid xilli ciyaareedkii 2006 / 07, Reyes ayaa sidoo kale ku guuleystay horyaalka La Liga.
Jose Antonio Reyes Sheeko dheeraad ah sheeko xariif ah - Soo koobista muuqaalka
Fadlan ka raadi hoosta, fiidiyoogeena YouTube Soo koobida boggan. Si wanaagsan Booqo iyo Abaalmarin inaga Youtube Channel Wixii fiidiyoow ah.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada Jose Antonio Reyes ee sheekada iyo faahfaahinta sawir-la'aanta. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
David Silva Hore Dabeecada Xogta Wacan ee Xogta Lahaanshaha
Granit Xhaka Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha La Xiriira
Sergio Busquets Storyhood Plus Sheekooyinka Xogta Loo Yaqaano
Sead Kolasinac Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta